Xildhibaan Jeesow: Yaan la siyaasadeynin Caleema-saarka Madaxweyne Deni – Kalfadhi
Xildhibaan Jeesow: Yaan la siyaasadeynin Caleema-saarka Madaxweyne Deni
Dad badan ayaa rumeysan in, marka la fiiriyo dadka aadka u kala ra’yiga duwan siyaasad ahaan ee lagu wada casuumay Munaasabadda Caleema-saarka Madaxweynaha Puntland, Saciid Deni iyo Kuxigeenkiisa, Axmed Karaash, ay xafladaasi noqon doonto meel leysku dhaafsado hadalo siyaasadeed oo uu midba kan kale ku weerari doono.
Hase ahaatee, Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa soojeedinaya inaan Munaasabadda Caleema-saarka Deni iyo Karaash la siyaasadeyn. “Caleema-saarka walaalkeen Saciid Deni yaan la siyaasadeynin” ayuu Xildhibaan Jeesow ku yiri dhigaal uu kusoo daabacay Boggiisa Feysbuugga. “Waa duco iyo dardaaran” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Isagoo haddiiba ay jirto cid dano u gaar ah u tagtay Xafladda Caleema-saarka Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa Puntland la hadlaya ayuu Xildhibaanku sheegay iney la gudboon tahay iney arrinkaas dib uga joogsato. “Qofkii dano kale wata candhuuftiisa dib ha u laqo” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Ammiin Jeesow.
Dad badan, oo Barahooda Bulshada soo dhigayey waxa ay ka aaminsan yihiin isugu keenista goob ay si fool-ka-fool ah isugu arki karaan dad siyaasad ahaan aad isaga soo horjeeda, ayaa muujinaya iney Munaasabadda Caleema-saarka Deni iyo Karaash ee Garoowe ka filayaan weerar iyo weerar-celis siyaasadeed oo afka ah.
Madaxda iyo Masuuliyiinta leh Muxaafadka iyo Mucaaradka ee Munaasabadda Caleema-saarka Deni iyo Karaash joogta waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud iyo Shariif Sh. Axmed iyo Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waana siyaasiinta sida weyn loo falanqeynayo sida ay uga hadli doonaan munaasabadda Garoowe fiidkan.
Waxaa, sidoo kale, jooga halkaas madaxda Dowlad Goboleedyada, gaar ahaan Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug, oo aysan isku fiicneen Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo oo ay dhawr mar weerar afka ah iyo mid qoranba isu mariyeen warbaahinta.
Xildhibaankii saddexaad oo shaaciyey inuu ka baxay Xisbiga Midowga Nabadda iyo Hormarka
Madaxweynaha Soomaaliya oo aqbalay inuu la hishiiyo Dowlad Goboleedyada iyo Mucaaradka